एक अन्र्तवार्ताले फेरि विवादमा आईन् करिष्मा - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
८ आश्विन २०७४, आईतवार १७:१२ 17
अभिनेत्री करिष्मा मानन्धर एक अन्र्तवार्तापछि विवादमा आएकी छिन् । कहिले बोल्न नजानेका कारण त कहिले सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यिक्तिका कारण विवादमा आईरहने उनी यस पटक आफूले दिएको अन्र्तवार्ता र अन्र्तवार्ता लिने पत्रकारबारे गरेको टिप्पणीका कारण विवादमा आएकी हुन । बिहिबार सिनेमा ‘ऐश्वर्य’को ट्रेलर लन्च कार्यक्रममा नेपालका केही कलाकार र पत्रकारहरुको जमघट थियो । ट्रेलर लन्च कार्यक्रममा पुगेकी करिष्माले फर सि नेटवर्कको शो ‘द बेबी शो’मा सुन्दर खनाल उर्फ बेबीसँग अन्र्तवार्ता दिईन् ।
बेबीले आफ्नो क्यारेक्टरमा डुबेर फुपु भनेर उनलाई सम्बोधन गरे भने उनले रिस दबाउँदै अंकल भनेर जवाफ फर्काईन् । ६ मिनेट अन्र्तवार्ता दिने क्रममा उनी मजैले बोलेकी छिन् । तर उनले उक्त अन्र्तवार्ता दिईसकेपछि भने बाटोमा आफूलाई उक्त पत्रकार सम्झेर हाँसो उठेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याटस लेखिन् । उनलाई सुन्दर खनाललाई सानो साईजको फन्नी पत्रकार भनेर सम्बोधन गरेकी छिन् ।
करिष्माले नेपाली पत्रकारहरुलाई सिनेमा बारे क्लास नै दिनुपर्ने भन्दै अन्य पत्रकारहरुलाई पनि व्यङग्य हानेकी छिन् । करिष्माले त्यस्तो स्टयाट्स लेखेपछि भने धेरैले उनले नै मिडियाहरुलाई राम्रो सँग नचिनेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाली मनोरन्जनको क्षेत्रलाई हेर्दै आएको फर सि नेटवर्कका बारेमा थाहा नपाएको भन्दै पनि केहीले अचम्म मानेका छन् ।
‘अचम्म लाग्दो कुरा यो जीवन मा के के हेर्नु पर्ने हो कुनि ? हिजो एउटा सिनेमाको कार्यक्रममा गएको थिए देखेपछि आजकलका अनलाइनहरु त फेस गर्नु त परि हाल्छ कमसेकम उनिहरु लाई सिनेमा बारे एउटा क्लास त दिनै पर्ने हुन्छ, जस्तो तपाईको फस्ट मुभी कुन हो ? नेपाली चलचित्र को सेलिब्रेटि भनौदा को यो भनाई सुनेर उनीहरु दङ्ग हुन्छन् याहा हरु को जानकारी को लागि , दर्शक लाई थाहा छ भुवन के सि राजेश हमाल या करिश्मा को मुभी केके हुन (सुझाव) ।। चलचित्र पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ भने यो क्षेत्रको यथार्थ जानकारी राख्नु होला, तर हिजो त अत्ति भयो एउटा चस्मा लगाए को स्यानो साइज को मान्छे उफ्रिदै मेरो सामु क्यमारा तेर्साएर सोधदै थियो । फूपू के छ एक्छिन त म अक्क न पक्क परे । त्यो मानिस लाई सहि प्रकार ले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे वाहाकै तरिका ले । तेस्ले अनेकौं पटक फुपू कि फूपू भनेर क्यमरा को सामु उफ्रिरहेको थियो । मलाई नेपाली कलाकारित गरेर गल्ती गरेकी केहो भन्ने महसुस गरायो त्यो हासो उठदो मानिस ले ।। बाटोमा घर फर्किदा मन मा खेलिरहेको थियो के येत्रो वर्ष हामी ले अनेकौं दुख सहेर गरेको काम को मुल्यांकन के यो फनि मानिस ले सार्वजनिक ठाउँमा मजाक बनाउनको निमित्त हो ? चलचित्र पत्रकारसंघ को ध्यानाकर्षण होस । जय नेपाली चलचित्र”
करिष्माको यो स्ट्याटस पछि ठूलो पर्दा टिभिका पत्रकार जीवन पराजुलीले उहाँसँगै गएर पत्रकारिता पढ्न मन छ भनेर व्यङग्य प्रहार गरेका छन् । त्यस्तै एक जना सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ता विदुर नेपालले पत्रकारिता बिषय के हो भन्नि कुरा ९ कक्षा पढ्दै गरेको बिद्यार्थी लाई सम्पुर्ण ज्ञान नभएर नै त्यो प्रकारको कमेन्ट गर्नु भएको हो । ज्ञान को कमि कस्लाई छ जनताले मुल्यांकन गरेका छन् । भनेर लेखेका छन् ।